ADIGA LAFTAADA: KURSIGA MIISAANKA EE BILOWGA AH - KALKAALIYAHA
Inta uu nool yahay, bani-aadmigu wuxuu ku fidsan yahay quruxda: caddaynta dhaqanka maaddooyinka iyo ruuxaba waa caddaynta laga yaabo in taas. Dadka waxay noloshooda ku qurxiyeen sawirro, sawirro, stucco, wejiyo iyo waxyaabo kale oo badan oo la heli karo kuwaas oo leh ujeedo sixir ah.
Cabbitaanka geedaha qurxinta, oo ay ka mid yihiin iyaga oo siinaya qaab gaar ah, iskudubarid laamaha qaabka gaarka ah, waxay ka kacday dhaqanka dhaqanka. Munaasabadaha loogu tala galay awoodda dabiiciga ah iyo wareegyadooda nololeed, dhirta ayaa door muhiim ah ka ciyaartay.
Isbedelka ficilada ficilka ee farsamada ee dhismaha beerta waxay dib u soo noqdaan ilaa qadiimiga Rome. Cilmi-baareyaasha waxaa jira ra'yi ah in Rome, oo iyana, ay ka qaadeen Ancient Masar. Dhexdhexaadiye Yurub ah, guushii Boqortooyada Roomaanka, ma aysan dayacin farshaxanka sare, waxa uu barbar socday bariga. Naqshadda beeraha waxay gashay Ruushka waxayna bilaabeen inay si joogto ah ugu faafaan wakhtiyada Petrovsky.
Maalmahan waa farshaxanka sare ee sare waxay ku heleen tusaalooyin kale - farshaxan gacmeed oo yar oo qaab ah oo geed ah. Waxa loo yaqaan jihadaas Kursiga gacanta.
Topiary waxaa loogu talagalay in lagu qurxiyo gudaha, si ay ugu adeegto sida quruxda hadiyadaha, si ay u noqdaan hadiyad, si ay u qaadaan load ah semantic iyo qurxiyo iyo si looga farxiyo isha. Iyadoo ku xiran ujeedada iyo walxaha laga sameeyay, waxaa weli loo yaqaan "geedka farxada" ama "geedka lacagta."
Ma taqaanaa? Asalka ereyga "sareey" wuxuu leeyahay xididada Giriiga iyo Roomaanka, isticmaalka farshaxankan waqtiyada qadiimiga ah lama weydiin karo, gaar ahaan marka la eego qoraallada Roomaaniga ah.
Geedka farxada leh waa in la sameeyaa iyadoo macnaheedu yahay in gacmahaaga loola jeedo, waxaa lagugula talinayaa inaad sii wadatid, marka laga reebo fikradda naqshadeynta soo bandhigaysa haddii kale, alaabta loo oggol yahay in loo isticmaalo wax kasta oo aad rabto, kaliya malahaaga iyo dhadhankaagu waa kooban yahay.
U soo jeesashada dhaqamada Bariga iyo nidaamka Feng Shui, waxaan aragnaa in geedka gurigu uu muhiim u yahay. Iyo sidee kale? Dhammaanba, waa qaabka midnimada adduunka, qaabka noocyada kala duwan ee joogitaanka iyo, dhab ahaantii, aduunka. Marka loo eego barista bariga, waa in lagu dhejiyaa qaybta bariga ee guriga si loo soo jiito caafimaadka iyo waqooyiga-bari-wanaagga.
Waa muhiim! Waa lagama maarmaan in la sameeyo qalabka gacanta oo aan ka badnayn nus mitir sare si loogu sahlanaado meesha ay ku taal gudaha gudaha.
Kalkaaliyaha - Tani waa geedka gacmeed, oo laga ilaaliyo geedka, laga yaabee, kaliya qaybo ka mid ah qaybaha: taajka, guntinta iyo awoodda ay ku jirto "beeray." Ma'aha lagama maarmaan in la ilaaliyo saamiga dabiiciga ah, waa in la fiiriyaa xasilloonida dhismaha.
Deeqaha Crown - qaybta ugu muhiimsan, ee qaadaysa galka semantic iyo qurxinta iyo soo jiidashada dareenka ugu weyn. Inta badan, saldhigeedu wuxuu ku yaalaa kubad, walxaha loogu talagalay xumbo, papier-mâché, wargeysku wuxuu ku ruxaa kubad, ama wax kale oo ka soo bixi kara shuruudaha farshaxanka. Waxaa laga dhigi karaa qaabka wadnaha, nooc ka mid ah joomatari ama shay kale oo kasta iyada oo la raacayo naqshadeynta.
Qalabka wadnaha ayaa lagula talinayaa in laga sameeyo kaarbo daboolay suuf ama warqad. Goobta sare ee jirka waxaa laga sameeyaa shey kasta oo ku haboon oo u muuqda si waafaqsan farqiga, awooda farsamada iyo fikradda farshaxanka. Waxaa laga samayn karaa ulaha, saqafyada, qalin-qori, silig, tuubbo, isku-dhejisyo alwaax ah iyo wixii la mid ah. Marar badan jirridda waxaa lagu qurxiyaa warqad, ranji, ribbons, bac iyo qalab kale.
Waa muhiim! Foostada waa in loo sameeyaa si habboon oo ay u adkeysan karto farshaxanka, maxaa yeelay waa link oo u dhexeeya taajka iyo saldhigga.
Dabcan, jirku waa inuusan noqon mid aad u qaro weyn ama dhuuban, qalafsan ama jilicsan, waa inay ku haboonaato halbeegga.
Istuudiyaha sare waxaa laga samayn karaa xumbo ama xumbo leh miisaan dheeraad ah, macmacaan, malab ama waxyaabo kale oo buuxiya shuruudaha. Hadafkeeduna waa in la dhiso qaabdhismeedka oo dhan meel xasiloon oo aanad ka taxadarin taajka. Sida caadiga ah, istaandarka had iyo jeer waa la qurxin si aan u muuqan karin. Waxaa lagu dhejiyaa dheriga, koobka, dhalada ama weel kale, kaas oo lagu qurxiyey qaabka guud ee naqshadeynta.
Kursiga gacanta - Tani waa hadiyad wacan ama alaabta xusuusta leh, waxa ay qaadataa diirimaadka gacmaha ee abuuray, iyadoo isla mar ahaantaana ah qaab qurux badan oo qurux badan.
Ku dhowaad marnaba maaha inay samayso farshaxan sida waafaqsan naqshadda asalka ah. Xagga sare, sida shaqo kasta oo hal abuur ah, geedi socodka abuuritaanka ayaa xayira xaaladdiisa. Natiijo ahaan, ka dib marka uu dhammeeyo shaqada, waxa laga yaabaa in uu u jeedo in uusan aheyn wax walba oo uu ku fikirayay. Tani waxay ka dhigaysaa shaqada sii noolaaneysa, sida ay ku dhahaan, "nafta."
Ma taqaanaa? Bariga, fanka farshaxanka beerta, sida dhaqamada kale ee Bariga, waxay raaceen waddada horumarka waxayna u beddeshay farshaxanka bonsai.
Waxyaabaha muhiimka ah ee DIY
In soo saarida alaabta topiariya sida isticmaalka:
dhar kala duwan iyo cajalado kala duwan;
qalabka dabiiciga ah: kabaha, ukunta, caleemaha, ubaxa, iyo wixii la mid ah;
kafeega, digirta, badarka, baastada;
si gaar ah loo soo iibsaday ama la siiyay (tusaale ahaan, qurxinta Christmas-ka) qurxinta;
xabagta, mashiinka, isku dhiska dhismayaasha.
Waxaa laga yaabaa inaad u baahatid inaad iibsato alaab qaar, u hesho qaar bilaash ah inta lagu jiro safarka badda, socodka duurka ama beerta, qaar baa laga yaabaa inay gurigaaga joogaan, way fududahay inaad wax uun sameyso.
Ka hor intaanad sameynin hagaajinta, waa fikrad fiican inaad samayso baaritaan guriga. Waxay noqon kartaa in alaabta la helo ay dhiirigeliso naqshad gaar ah. Tani waa hab weyn oo lagu siinayo nolol wanaagsan oo ku saabsan waxyaabaha u adeegay laakiin aan lumin jiiditaankooda, iyo sidoo kale inay raadsadaan codsi loogu talagalay waxyaabaha ka baxsan dayactirka, dharbaaxada ama nooc ka mid ah shaqo-qabashada.
Intaa waxa dheer, samaynta sare waxay keenaysaa farxad, horumarinaysaa hal-abuurka, waxayna suurtogal u tahay in la yiraahdo "jacayl" hab kale.
In kasta oo xaqiiqda ah in noocaan u baahnaanta shaqadiisu aysan u baahnayn xirfado khaas ah, ka hor intaanad bilaabin si aad u sameyso gacantaada, waxaa lagugula talinayaa kuwa bilawga ah in ay bartaan farsamada iyagoo adeegsanaya tusaale ahaan fasal mihnadeed ama ugu yaraan muuqaal sawir-gacmeed tallaabo tallaabo ah.
Warqad waa alaabta la awoodi karo ee laga helo guriga kasta. Tani ama nooca nooca ah ee farsamada gacanta ayaa loo badinayaa in loo isticmaalo.
Ma taqaanaa? Wargeyska ayaa loo isticmaali karaa si loo aaso salka, waxaad kaloo kaashan kartaa dambiisha.
Waraaqaha midabada badanaa waxay qurxisaa weelka alaabooyinka la dhigo, sameynta qurxinta taajka ama caleemaha saldhigga ah ee qurxinta xiga, iyo sidoo kale ku duub sanduuqa.
Waraaqda dhirta loo yaqaan 'Corrugated paper' waa qalab caan ah oo jaban oo soo saarista dhirta ornamental. Iyada oo ay ku xiran tahay dhismaha caagagga, ubaxyada laga sameeyay waxa ka mid ah wax la aqbali karo.
Markaad go'aansatay inaad qurxis gashato ubaxyada ubaxa leh, waxaad isticmaali kartaa sawir talaabo tallaabo ah si aad u barato sida loo abuuro noocyo kala duwan oo ubax ah: shaati, poppies, chamomiles, chrysanthemums, carnations, peonies, tulips, irises iyo kuwa kale.
Qurxinta waxay kuxirantahay saldhigga iyadoo la isticmaalayo qalabka daboolka si adag si isku mid ah, sidaa darteed ma jiraan wax khasaare ah.
Suufiyada warqadaha casriga ah waxay leeyihiin sifooyin qurxiyo badan. Waxaa loo isticmaalaa noocyo badan oo gacmeed, oo ay ka mid yihiin soo saarista korka. Inaad noqoto mid aan qaali ahayn iyo jawi bey'adeed oo raaxo leh, waxay ku quruxbaxayaan noocyo kala duwan, midabyo, qurxiyo.
Markaad sameysid boogo, waxaad:
samaynta ubaxyo qaabab kala duwan iyo midabo, oo leh qaab ka mid ah oo mar dambe qurxin taajka;
marka loo eego mabda'a of decoupage, daboolka salka ku yaal si aad u siiso midabka loo baahan yahay oo eegto in aan khasaarin doonaa halabuurka la dhammeeyey marka lumen random u muuqdaan;
si aad u qurxiso jirridda geedkaaga, adigoo isticmaalaya suufin ka mid ah midabka iyo qaabka ku haboon;
si loo qurxiyo weelka uu korjooguhu ku yaallo, si isku xiran u dhigo hal-abuurka guud, tusaale ahaan, iyadoo la adeegsanayo farsamada casriga.
Ma taqaanaa? Dhirta kirismaska ​​laga bilaabo mawduucyada mawduuca Cusub ee sannadka cusub waa mid wanaagsan.
Farshaxan aad u xiiso badan oo isticmaalaya dhar. Duufaan, suuf, xariir iyo jumlado kale oo midabyo ku habboon ayaa loo isticmaalaa. Suugaanta Satin ayaa caan u ah sida xayeysiiska. Tilmaamaha dharka ee taajka waxaa lagu buuxiyaa boomaal, badhida, boodhyada, tirooyinka diyaarka ah iyo walxaha dabiiciga ah.
Suufiyada satin waxaa loo isticmaalaa qayb kasta oo ka mid ah farshaxanka. Ubaxa iyo qaansooyinka ka samaysan iyaga ayaa qurxin taajka, waxay ku duubaan jirridda, iyo sidoo kale qurxin taagan.
Ka dib markii ay go'aansadeen in ay qurxiyaan muraayadaha leh alaab ka samaysan foornooyin, fiiri fasalka masters leh sawirada tallaabo tallaabo ah ee wax soo saarkooda, maadaama ay jiraan farsamooyin badan oo kuu oggolaanaya inaad sameysid noocyo kala duwan oo midabo ah.
Ma taqaanaa? Qurxinta quruxda badan ee quruxda badan ee tulle, oo aad u jilicsan oo maskax ku shaqeeya dharka. Waxay ku xiran yihiin saldhigga pin.
Topiary iyadoo la isticmaalayo digirta qaxwaha waa mid aad u caan ah. Inaad noqoto walax aad u qurux badan, miro-dhaliyeyaasha ayaa soo baxaya caro badan oo dadku jecel yihiin waxayna ku xiran yihiin raaxo. Sidaa darteed, kalluunka kafeega wuxuu isku daraa faa'iidooyin dhowr ah, sida uu qabo mudnaanta.
Kiriimka qaxwada waxaa loo sameeyaa qaab qaab ah oo leh geed jilicsan oo leh joodar leh, iyo qaab ah "koobab", oo laga soo shubo kafeega. Mid kale waa "qosolka qaxwaha" - geed oo lagu qurxiyo koofiyad koranto, kabo iyo wax la mid ah.
Dufanka qafiska ayaa u adeegi kara koobka kafeega.
Waxaa lagu talinayaa in rinjiyeynta horay loo dhigo ama salka loo dhigo warqad si aad uhesho qaxwada si ay udhacdo aysan muuqan. Maaddada nafaqada ah ayaa si aan kala sooc lahayn loo qaabeyn ama amar gooni ah, tusaale ahaan, sawiridda qaab. Waxaa lagu rinjiyeeyn karaa alaabta la dhamaystiray oo leh rinji rinji.
Waa muhiim! Shukulaatada, qoraxda, xiddigta xiddigaha, vaniljiska iyo dhirta kale waa mid aad u fiican sidii ay ugu dabooli lahaayeen caanaha kafeega.
Si loo soo jiito fican lacagta, geedka farxada waxaa laga sameeyaa qoraallada, shayga, ama labadaba. Biilasha waxay isticmaalaan qalabka xusuusta, iyaga oo ubaxyo, dhicin, duubo iyo wixii la mid ah. Qadaadiicda qaaliga ah waa quruxda cajiibka ah, calaamadeynta dahabka iyo soo jiidashada hantida guriga.
Waa muhiim! Geedka noocan oo kale ah ayaa ku haboon inuu ku daro hadiyado qaab lacag ah oo lacag ah, tusaale ahaan, xaflad aroos ah ama xaflad guri.
Marmarka qaarkood waxaa laga sameeyay ubaxyo cusub si ay u bixiyaan sida bouquet aan caadi ahayn. Nasiib darro, ikhtiyaarkan waa mid gaaban, laakiin waa mid waxtar leh oo hadana wuxuu noqonayaa hadiyad aan la ilaawi karin.
Muddo dheer, bouquet ayaa la keydin doonaa haddii laga sameeyo ubax la qalajiyey ama kuwa, qalajinta baxay, ha lumin aragti. Tusaale ahaan, dhimasho la'aanta.
Ubaxyada sida gaylardiyu, Shabo, caro, feverfew, vatochnik, hibiscus, xayawaanka, rudbeckia, kosmeyu, gypsophila, clematis, ganiusiya, qoob ka ciyaarka, daisies iyo asters ayaa loo isticmaali karaa si aad u sameyso koronto leh gacmahaaga.
Caleemaha xilliga dayrta, oo lagu qurxiyo rinjiyeynta boodboodka, ayaa ah qalab qurux badan oo lagu qurxiyo farsamooyinka. Roses laga sameeyey caleemaha midabka leh waa mid cajiib ah. Topiary ay isticmaalaan waxay u eegi doonaan xiiso iyo faa'iido leh.
Wax yar oo soo jiidasho leh ayaa noqon doona caleemo marka ay yihiin, la xushay dhadhanka midabka iyo cabbirka, si habboon loo qalajiyey oo loo sameeyay qaab qurux badan. Badeecad noocan oo kale ah ayaa ku habboon fasaxyada mawduuca dayrta, iyo sidoo kale boomadaha dhalashada dhalashada ee xilliga dayrta.
Waa ku haboon tahay inaad geed ka samayso farxad ahaan hadiyad ama damaashaad gurigaaga oo aad ku qaadatid fasax kasta.
Miisaanka casriga ah ee qaabka geedka, oo lagu qurxiyay jilicsanaanta kiristaanka iyo qurxinta Christmas, ama qaabka geedaha kirismaska ​​ayaa qurxin doona qol kasta. Muraayadda qurxinta ee munaasabaddan waa in si habboon loo doortaa: isku-darka casaanka iyo cagaaran, cad, buluug, buluug, lacag, guud ahaan, isticmaali midabada Sanadka Cusub.
Daahir ah in geedaha Maalinta Jacaylka ee qaabka wadnaha ee gamut-casaan-caddaan iyo buuxiyo nacnacan waxay ku farxi doonaan dadka leh dhadhanka ugu baahida badan.
Dhirta Easter waxaa lagu qurxin karaa ubaxyo, ukun la rinjiyeeyay, sawirrada bakaylaha iyo digaagga iyo qurxinta kale ee la beerto. Waxay u eegi doonaan asalka dhabta ah labadaba miiska fasaxa iyo gudaha gudaha.
Ma taqaanaa? Geedka farxada waxaa loo go'aamiyaa gabi ahaanba fasax kasta, adoo isticmaalaya qurxiyo ama xilliyo qurxin.
Daawo fudud ayaa adigu naftaada u samee: talaabo talaabo tallaabo leh sawiro
Sida loo sameeyo kumbuyuutarka gacmahooda, waxaad ku baran kartaa adiga oo eegaya fasal mihnadeed, taas oo talaabo talaabo ah ay muujinayso taxanaha tallaabooyinka.
Algorithm ee sameynta farsamada sida fudud waa:
iibso xumbo dukaanka farsamada ama saldhig u samee topiariya qaab ahaan kubadaada adigoo ka soo qaadaya warqad;
qurxin saldhigga midabka la rabo warqad, ku hagaajiso foornada leh koollo;
si ay u sameeyaan buro ama ubax laaluush, adoo isku xiraya geesaha oo leh seer qarsoodi ah oo adag;
samee xaddiga saxda ah ee midabada;
ku hagaajin adigoo isticmaalaya qalab kulul oo ku yaal saldhigga, si aad u dheeraato, waxaad ku dari kartaa pin ama ciddiyaha;
Caddaannadu waxay masraxa maskaxdu yeelan kartaa;
Kala baxsiyada waxaa laga yaabaa in lagu daboolo caleemo caano ah, iyaga oo ku dhexjiraya qaab baaritaan ah oo loogu talagalay in la eego muuqaal wanaagsan;
in lagu qurxiyo foosto waraaqaha cagaarka ah;
dheriga ayaa noqon doona koob balaasti oo lagu rinjiyeeyo rinji dahab ah;
oo ka mid ah xabadka oo ka mid ah shubanku la sameeyey, waa inaad qaanso xirtaa saldhigga sagxadda saxda ah ee taajka;
si loo dhiso dhismaha culus, dhagxaan ku rid hoose ee koobka, ku dheji foosto meel qumman, ku daadi dufanka koobka oo la badhxay si joogta ah labeen dhanaan iyo heerarka geesaha;
ka dib markii gypsum uu qalajiyey, qaybta sare waa in lagu daboolaa dhagaxyo lagu qurxiyo si ay u dhigmaan halabuurka, lagu dhejiyo daboolka kulul, ku dar dhuuban, nalalka, dhibcaha dhoobo ee ku haboon;
ka dib markii la qalajiyo, halbeeg qurux badan ayaa la siin karaa ama lagu qurxin karaa gudaha gudaha.
Waxaa jira talooyin dhowr ah taas oo ay tahay mid la jecel yahay in la dhegeysto, sameynta sarbeebtaada, gaar ahaan kuwa bilowga ah, ee aan la kulmin arrimaha gacanta lagu sameeyey.
Talada guud ee alaabta guriga oo dhan waa in la isticmaalo midabada ku habboon ee ku habboon daaqada, isla sidaas waxay khuseysaa cabbirka, saamiga iyo qaabka farshaxanka.
In ka badan seddex midab ayaa ku adkaan doonta in lagu daro hal gabal, ka ilaalinta wax sharafdarro.
Waa in la rinjiyo ama lagu riixo midabka la rabo oo saldhig u ah taajka; alaabta taajka ah ee foorarsiga ah ee daldaloolada waxay hoos u dhigi kartaa shaqada dhamatay.
Kala-bixinta - tani waa waxa ka dhigi kara xajmiga wax soo saarka, waa inaad iska ilaalisaa culeyska iyo, si tartiib ah, khafiifinta xad-dhaafka ah ee dhismaha.
Dharka, marka laga soo tago dillaac, waa in la kordhiyaa si kale oo loo xakameeyo wax kale: dhejinta, pin, darajo, muraayad, iyo wixii la mid ah, iyadoo ku xiran alaabta la isticmaalo.
Inkasta oo tiro badan oo talooyin ah iyo talooyin ku saabsan soo saaridda topiariya Ma jiraan xayiraado ama tilmaamo oo dhan. Qof kastaa wuxuu qabtaa shaqadiisa, siduu naftiisa u sheegi lahaa. Muhiim ma ahan in la muujiyo geedka dhabta ah, farshaxanku waa abuur cajiib ah, oo leh macneheedu uu yahay macallinka.